Maxaa Looga Hadlay Kulankii Koowaad Ee Kalfadhigii Saddexaad Ee Golaha Shacabka – Kalfadhi
Si wadajir ah ayaa 10-kii bishii Maarso ee sanadkan loo furay kalfadhigii saddexaad ee Baarlamaanka tobanaad.
Qorshuhu waxa uu ahaa in afar bil uu socdo lana soo xiro 10 bishaan Luulyo, Laakiin waxaa lasoo xiray 28-kii bishii Meey 2018-ka.
Kalfadhi waxa uu idiin soo gudbin doonaa taxanaha kulamadii dhacay Kalfadhigii saddexaad ee labada gole. Waxaanan ku billaabi doonaa kalankii koobaad ee kalfadhigii saddexaad ee Golaha Shacabka.
Kulankii koobaad waxa uu dhacay maalin Isniin ah – 12-kii bishii Meey 2018 – waxaa soo xaadiray 170 xildhibaan. Waxaa shir guddoominayay guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheikh Cismaan “Jawaari”.
Jawaari ayaa ugu horreyn magaca xildhibaannada kusoo dhaweeyay saddex xildhibaan oo ku cusbaa golaha shacabka xilligaas oo kala ah Xildhibaan Nuur Iidoow Beyle, Xildhibaan Faatax Siciid Xasan iyo Xildhibaan Maxamuud C/llaahi Sheikh Siraaji.
Waxa uu sidoo kale caddeeyay Jawaari maalinkaas in uu bannaanyahay kursigii Xildhibaan Xuseen Cismaan Xuseen oo noqday taliyaha hay’adda sirdoonka Soomaaliya.
Ajandihii kulankii koobaad ee Kalfadhigii saddexaad ee Golaha Shacabka waxa uu ka koobnaa, doodda hishiiska shirkadda DP_World, qeybinta warbixinta wax ka beddelka xeer hoosaadka Golaha Shacabka, iyo miisaaniyaddii 2018-ka.
halkaan ka akhriso xeerka dalka looga mamnuucay shirkadda DP-World.
“xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada Soomaaliya”
Ka hor inta aan la ansixin ajandaha ayuu sheegay Jawaari in uu gacanta ku hayo mooshin ay saxiixeen 11 xildhibaan ayna ku dalbanayaan in ajanadaha maalinkaas laga saaro doodda shirkadda DP-World
jawaari oo shir guddoomiyana kulankii koowaad ee kalfadhigii saddexaad
Cod gacan taag ah kaddib waxaa u codeeyay in ajanadaha sidiisa sii ahaado 151 xildhibaan, 2 xildhibaan ayaa ka aamustay halka 17 kalana diideen.
Jawaari ayaa intaas kaddib sheegay in si toos ah ay u guda gali doonaan ajandahooda. Waxaana mudanayaasha u akhriyay soo jeedinta “xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed” mudane Mahad Cabaddlla Cawad oo ah guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka.
Mudanihii ugu horreeyay ee halkaa ka hadla waxa uu ahaa Cabdiwali Sheikh Ibraahim “Muuddey” oo sheegay in xildhibaannada waajib ka saaranyahay in ay ka jawaabaan dareenka shacabka Soomaaliyeed isla markaasna aysan cidna ugu roonaan kuwa kalana ugu darnaan.
Waxa uu sheegay Muuddeey in doodda xildhibaannadu ay manta yeelanayaan ay tahay “dhaxal dhawr” isla markaana ay tahay in daacad laga noqdo.
Xildhibaan Cali Jaamac Jingili oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in “xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed” lagu xuso dhammaan shirkadaha hoos yimaada shirkadda DP-World, isla markaana aad looga fiirsado sabab walba oo dalka ay uga sii shaqeyn karto.
Xildhibaan Jingali oo ka hadlaya Kulankii Koobaad ee kalfadhigii saddexaad
Mahad Salaad oo isna ka mid ahaa xildhibaannada kulanka maalinkaas ka hadlay ayaa sheegay in uu aad u taageersanyahay xeerka dalka looga mamnuucay in ay ka dhex shaqeyso shirkadda DP-World, waxa uuna codsaday in muddo loo qabto in madaxweynuhu saxiixo xeerkaan si dadaalka munadayaasha Golaha Shacabka uu u noqdo miro dhal.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlaya kalfadhigii saddexaad kulankiisii koowaad
Xildhaan C/llaahi Goodax Barre oo isna maalinkaas hadlay waxa uu sheegay in “xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed” loo baahanyahay in lagu daro ama lagu xuso ciqaabta uu muteysanayo muwaadinka jabiya.
Xildhibaan Goodax waxa uu qabay aragti ahayd in lagu masuulkii sameeya hishiis “suuqa madoow” ah xabsi u dhaxeeya 10 ilaa 30 sano.
C/llaahi Goodax Barre oo ka hadalya kulankii koobaad ee Kalfadhigii saddexaad
Waxaana soo jedintaas xildhibaan Goodax ka jawaabay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cawad isagoo sheegay in “xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed” qofkii jabiyaa lala tiigsan doono xeerka ciqaabka Soomaaliyeed qeybta “ dambiyada liddiga ku ah shakhsiyadda qaranka Soomaaliyeed”.
Intaas kaddib waxaa cod gacan taag ah loo qaaday “xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada Soomaaliya” waxaana diiday hal xildhibaan, waxaa ka aamusay xidlhibaan kale, waxaana oggolaaday 168 mudane.
Waxaa soo xiray kulankii koowaad ee kalfadihigii saddexaad Maxamed Sheikh Cisaan Jawaari isagoona xogheynta faray in sharcigaas ay u gudbiyaan Aqalka Sare.
Maxaa Looga Hadlay Kulankii Koobaad Ee Kalfadhigii Saddexaad Ee Aqalka Sare